भीडभाड र सरसफाइ नै रोकथामको उपाय
As of Sat, 30 May, 2020 04:25
शुक्रवार, चैत्र १४, २०७६
घरबाहिर ननिस्कौं, कोरोनाले छुँदैन
फिजिसियन, न्युरो हस्पिटल प्रालि, विराटनगर
गाउँ–घरमा वा तपाईंको छरछिमेकमा र परिवारका कोही व्यक्ति विदेशबाट आउनुभएको छ भने उहाँलाई तत्कालै होम क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । यो रोग नेपालभित्र उत्पन्न भएको होइन, चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विश्वभर फैलिसकेको छ । कोराना भाइरसद्वारा लाग्ने रोग (कोभिड–१९) नेपालमा उत्पन्न भएको रोग होइन । त्यसका कारण यदि यो रोग नेपालमा फैलिन्छ भने देशभन्दा बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूले ल्याउने रोग हो । अहिलेसम्म जस–जसमा रोगको संक्रमण देखिएको छ उहाँहरू विदेशबाट आउनुभएको हो । विदेशबाट आउने व्यक्तिमा कोरोनाको भाइरस हुन सक्छ । उहाँहरूसँग संसर्गमा रहेका व्यक्तिहरूमा यो रोग लाग्छ । यो बिस्तारै व्यापक हुन्छ, फैलिँदै जान्छ ।
जब कुनै व्यक्तिलाई यो कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन्छ त्यो संक्रमण भएपछि लक्षण आउनसम्म एउटा समय लाग्छ जसलाई हामी ‘इन्क्युभेसन प्रियड’ भन्छौं । तर यो प्रियडमा बिरामीमा लक्षण नभए पनि अरू व्यक्तिमा भाइरस सार्न सक्छन् । जब लक्षण आएपछि अरू व्यक्तिलाई भाइरस अवश्य सार्न सक्छ । आएका लक्षणमध्ये पनि ८० प्रतिशत लक्षणचाहिं सामान्य लक्षण हुन्छ । थोरै मात्रामा ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, हल्का जीउ दुख्ने हुन्छ । यति मात्रै सामान्य लक्षण हुन्छ । हामीले विदेशबाट आएको र नेपालमा रहेको कुन व्यक्तिमा भाइरस छ भनेर पत्ता लगाउन गाह्रो किन हुने भयो भने लक्षण आउनुभन्दा अगाडि पनि अरूलाई रोग सार्न सक्छन् । अब यो रोगबाट बच्च एउटै उपाय हो— व्यक्तिले १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुप-यो । होममा बस्नेबित्तिकै संक्रमित होइन, के कुरा बुझ्नुप-यो भने होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेबित्तिकै कुनै पनि व्यक्ति रोगी होइन । रोगी भएँ भनेर कसैले पनि हतोत्साही हुनु हुँदैन । योसँगै अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने विदेशबाट आएर अन्तिम १४ दिनमा अरू कुनै व्यक्तिसँग संसर्गमा हुनुहुन्छ भने तिनीहरू पनि १४ दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बस्नु एकदमै जरुरी छ । किनभने त्यो व्यक्तिले कोरोना भाइरस अरू व्यक्तिलाई सार्न सकेको हुनसक्छ । यसरी यो भाइरस नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने यसले व्यापकता लिन्छ ।
यदि तपाईंको घरमा, छिमेकमा वा समाजमा कोही व्यक्ति भारतलगायत विदेशबाट आउनुभएको छ, उहाँलाई तत्कालै १४ दिनसम्म क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । यदि उहाँले मान्नु भएन भने सम्झाउनुपर्छ । सम्झाउँदा पनि मान्नुभएन भने नजिकैको स्वास्थ्य संस्थालाई खबर गर्नुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने यो रोग समाजमा फैलिन सक्छ । अन्तत: तपाईंको माझमा पनि आउन सक्छ, आफ्नो परिवार र समाजलाई समाप्त पार्न सक्छ यो भाइरसले । विश्वले नै स्विकारेको यो रोग लाग्न नदिन र जोखिम न्यूनीकरण गर्न घरमै बस्नुपर्छ । यसभन्दा अर्को विकल्प छैन । अहिले सरकारले मुलुकलाई नै लकडाउन गरेको छ । यसको पूर्ण पालना गरेको खण्डमा नेपालमा यो रोग फैलिन सक्दैन । होम क्वारेन्टाइनलाई सही र नीतिगत रूपमा लागू गर्न सकेमा मात्रै यो रोगलाई हामीले नियन्त्रण गर्न सक्नेछौं । अर्कातर्फ केही कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । एउटा कोठामा मात्र बस्ने, सकेसम्म ट्वाइलेट फरक प्रयोग गर्ने, घरबाहिर ननिस्कने, आफूले प्रयोग गरेका कुनै पनि सामग्री अरूलाई प्रयोग गर्न नदिने, हाच्छ्युँ गर्दा मुख रुमालले छोप्ने वा कुहिनोले छोप्ने, अरूसँग नजिक नहुने, हुनैपरेमा अनिवार्य मास्क लगाउने गर्नुपर्छ ।
चाहिने सामान लिन सकेसम्म एकै सदस्यलाई मात्र भन्ने, हरेक पटक सम्पर्कमा आइसकेपछि त्यो सदस्यले साबुन–पानीले हात धुने, आफ्ना लक्षणहरू बढेजस्तो लागेमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राखेर मात्र अस्पताल जाने गर्नुपर्छ । सामाजिक सम्पर्कलाई जतिसक्दो टाढा राख्न सकेमा पक्कै पनि कोरोनाविरुद्धको हाम्रो लडाइँ सफल हुनेछ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित
लकडाउन नै उत्तम उपाय
डा. सीपी आचार्य
छातीरोग विशेषज्ञ, पोखरा
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट हामी बच्नका लागि र यसको रोकथामका लागि सकभर धेरै मानिस भएको ठाउँमा नजाने, भीडभाडमा नहिँड्ने, भीडभाडबाट टाढै रहने गर्नुपर्छ । कन्ट्याक टु कन्ट्याकबाट टाडा रहनु कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ । रुघा लाग्ने, सुक्खा खोकी लाग्ने, उच्च ज्वरो आएको खण्डमा नजिकको स्वास्थ्य केन्द्र वा हाल स्थापना भएका फिवर क्लिनिकमा जाने गर्नुपर्छ वा प्रत्यक्ष चिकित्सकको सल्लाहबमोजिम सम्पर्कमा रहनुपर्छ, यस्तो अवस्थामा हामी आफू पनि बढी सतर्क हुनुपर्छ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चरक मेमोरियल हस्पिटल, गण्डकी मेडिकल कलेजमा हाल बिफर क्लिनिक सञ्चालन भएकाले कुनै शंका लागेमा त्यहाँ हामीले आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्छौं । यदि कुनै व्यक्तिमा कोरोनाका केही लक्षण देखापरेमा हामीले कोरोना परीक्षण गराउँछौं, अन्यथा सामान्य रुघाखोकी भएको खण्डमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरी न्यूनतम ३÷४ दिन घरमै आराम गर्न सुझाव दिएका छौं ।
कोरोना भाइरस जुन विश्वव्यापी रूपमा फैलँदो छ अब यसबाट हामीले रोकथाम र बच्ने उत्तम उपाय नै हाल राज्यले घोषणा गरेको लकडाउनलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु नै हो । चीनको वुहानबाट सुरु भएको यो भाइरस मानिसहरूको कन्ट्याक टु कन्ट्याक हुँदै हाल १ सय ९० भन्दा बढी मुलुकमा फैलिसकेको छ । भाग्यवश नेपालमा हालसम्म ३ जनामा पोजेटिभ देखिए पनि यसका कारणले मृत्यु भने भएको छैन । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरूको दुई सातासम्म तपाईं–हामी र सम्बन्धित व्यक्तिले पनि यसमा बढी ख्याल गर्नुपर्छ, यदि उसमा कुनै स्वास्थ्यमा समस्या आएमा स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पतालमा तत्काल खबर गर्नुपर्छ । यो सरुवा रोग भएकाले एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा कालका रूपमा नफैलियोस भन्नका निम्ति सबै सजग हुनुपर्छ । यदि कुनै व्यक्तिमा ज्वरो र रुघाखोकी लागेमा पानी प्रशस्त पिउनुहोस् र आराम गर्नुहोस् । स्वस्थ मानिसलाई खासै मास्क आवश्यक पर्दैन, धूलोधूवाँ भएको स्थलमा लगाउँदा राम्रै हुन्छ, अन्यथा शंकास्पद स्थलहरूमा लगाउँदा राम्रो हुन्छ । स्वास्थ्यकर्मी र जुन मानिसलाई रुघा, खोकी छ ती मानिसहरूले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ । कपडाको भन्दा सम्भव भए सर्जिकल मास्क प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ ।
कोरोना भाइरस हावाबाट सर्ने होइन, कन्ट्याकबाट सर्ने हो । त्यस कारण तपाईं जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीं सुरक्षितका साथ धेरै मानिसको जमघटबाट टाढै रहनुहोस् । एक मानिसबाट अर्को मानिसमा सम्पर्क गर्दा नै यो रोग सर्ने हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमित व्यक्ति भेटिएमा उसलाई छुट्टै रुममा राखेर उपचारसहितको आवासीय सेवा सुविधा दिनुपर्छ । गण्डकी प्रदेशमा यदि कोरोना भाइरससम्बन्धी कुनै जिज्ञासा र चिकित्सकको परामर्श आवश्यक परेमा हेल्लो डाक्टर ०६१—५२४०७४ मा सम्पर्क गरी आफ्ना कुनै समस्या राख्न सकिन्छ । कोरोना भाइरस भर्खरै आएको हुँदा यसको धेरै अनुसन्धान हुन बाँकी छ भने यसको हालसम्म औषधि नै पत्ता लगाएको अवस्था छैन । यसको किटाणु काठ, मेटलमा करिब दुई दिन, हातमा १० मिनेटसम्म र बाहिरी वस्तुमा करिब १० घण्टासम्म बच्न सक्छ भन्ने गरेको पाइन्छ ।
सेल्फ आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन नै राम्रो विकल्प हो
डा. राजन पाण्डे
प्रमुख मेडिकल अधिकृत भेरी अस्पताल नेपालगन्ज
कोरोना भाइरस सानो एउटा जीवाणु हो, ब्याक्टेरियाभन्दा पनि सानो । ब्याक्टेरियालाई कीटाणु भन्छौं, यसलाई जीवाणु भन्छौं । यो पुरानै भाइरस हो । यसका विभिन्न प्रजाति छन् । तिनले विभिन्न कालखण्डमा महामारी ल्याएका छन् । गत डिसेम्बरमा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोभिड–१९ कोरोना भाइरसको एक प्रकारको रोग हो । यसको वैज्ञानिक नाम सार्स कोभ–२ हो । कोभिड–१९ चाहिँ रोगको नाम हो भने सार्स कोरोना भाइरस–२ भनेको चाहिँ अहिलेको यो विश्वमा महामारी फैलाउने भाइरस हो ।
सामान्यतया: कोरोना भाइरसले १ जसय ४ डिग्रीभन्दा बढी ज्वरो आउने, सुक्खा खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने समस्या र कसै–कसैलाई श्वास–प्रश्वासमा समस्या भएर मृत्युसमेत हुने हुनसक्छ । अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको औषधि र भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन । त्यसैले यसको उपचार नै सम्भव छैन । विश्व स्वास्थ्य संगठनले टेस्ट टेस्ट टेस्ट भनेको छ । कुनै पनि रुघाखोकीको बिरामी आयो भने टेस्ट गर्नुप-यो । विशेषगरी कोरोना भाइरस प्रभावित देशबाट यात्रा गरी आएका वा ती व्यक्तिसँग दुई हप्ताभित्र सम्पर्कमा रहनु भएन । ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या छ भने टेस्ट गर्नुप-यो । दोस्रो कुरा, सामान्य रुघाखोकी लागेको छ भने पनि बिरामीहरू सेल्फ आइसोलेसनमा घरमै बस्ने । समुदायको सम्पर्कमा नआउने । तेस्रो कुरा, यदि कोरोना भाइरसको बिरामी छ भनेपछि उसलाई आइसोलेसनमा उपचार गर्नुप-यो । त्यस्तो ठाउँबाट यात्रा गरेर आएका मान्छेहरू छन् भने उनीहरू कम्तीमा दुई हप्ता क्वारेन्टाइनमा बस्नुप-यो । राम्रोसँग साबुन–पानीले हात धुने, एन–९५ मास्क लगाउने, सुरक्षित कपडा, ग्लोबहरू लगाउने र अल्कोहलबेस एपन्टसेप्टिक प्रयोग गर्नुपर्छ ।
कतिपय मान्छेमा रक्सी खाएपछि कोरोना लाग्दैन भन्ने भ्रम छ । अल्कोहल (रक्सी) वेस्ट एन्टिसेप्टिकले हात सफा गर्दा किटाणु मर्ने अलग कुरा हो । रक्सी खाएर बाँचिने, रक्सीले कोरोना भाइरस मर्ने भन्ने कुरामा कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । रक्सी खानेलाई कोरोना रोग लाग्दैन भन्ने कुनै वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित भएको छैन । यो भ्रामक कुरा हो । बरु रक्सीले मृत्युदर बढ्न सक्छ । त्यसैले यस्तो कुरामा सचेत हुन म सबैलाई अनुरोध गर्छु । त्यस्तै गर्मी लागेपछि कोरोना कम हुन्छ भन्नेमा पनि वैज्ञानिक आधार छैन । सामान्य सिद्धान्तत: गर्मीले किटाणु मर्छ भन्ने अलग कुरा हो । तर, डब्लूएचओले गर्मीले कम हुन्छ भन्ने कुरालाई त्यसरी प्रमाणित गर्न सकेको छैन । अमेरिकामै करिब १८ महिनासम्म संक्रमण रहिरहन्छ भन्ने कुरा आएको छ ।
कोरोनाको संक्रमणले जाडो र गर्मीसँग कुनै सरोकार राख्दैैन । चीनको वुहान, इटली, इरान र युरोपतिरको अनुभवमा ६० वर्षभन्दा माथिका वृद्ध उमेरका त्यसमा पनि दीर्घरोगीहरू दम, मधुमेह, मुटुरोगी र क्यान्सरका बिरामीजस्ता कडा खालका रोग लागेका बिरामीहरूको मृत्यु भएको छ । बच्चाहरूको मृत्युदर एकदमै कम देखिएको छ । मृत्यु हुनेमा ९० प्रतिशत मानिसहरू ५० वर्षभन्दा माथि र दीर्घरोगी पाइएको छ । त्यसैले त्यहाँको अवस्था हेरेर पनि हामी धेरै कुरामा सजग हुनुपर्छ ।
सुगर, प्रेसर, दम र दीर्घरोगका बिरामीहरू जसले लामो समयदेखि औषधि खाइरहनुभएको छ, उहाँहरू प्mलोअपका लागि अस्पताल जाने होइन, इमरजेन्सी परेका बेला त जानुप-यो । अनावश्यक अस्पतालको भीडभाडमा गएर अरू ज्वरो आएको बिरामीसँग सम्पर्कमा नआउनु नै राम्रो हुन्छ । जुन औषधि खाएको छ औषधि खाइरहने र आफ्नो नजिकको स्वास्थ्यकर्मीसँग सुगर, प्रेसर चेक गराउने, परामर्श लिने र अनावश्यक अस्पतालको भीडबाट बच्न सक्यो भने कोरोनाको संक्रमणबाट जोगिन सकिन्छ । किनभने वृद्ध उमेरमा त्यस्ता व्यक्तिको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने हुनाले कोरोनाको जोखिममा पर्ने खतरा हुन्छ ।
कोरोनाको त्रास विश्वमै छ । यसलाई हामीले गम्भीर रूपमा बुझ्नुपर्छ । मजाकका रूपमा लिनु हुँदैन । सकभर अनावश्यक काममा घरबाट बाहिर नजाने । रुघाखोकी, ज्वरो आएको व्यक्तिको सम्पर्कबाट टाढै बस्ने । कही सम्पर्क भइहाल्यो भने राम्रोसँग साबुन–पानीले हात धुने, आफू र आफ्नो परिवारका व्यक्तिहरू अनावश्यक यात्रामा निस्कनु हुँदैन । कोरोना रोग लाग्यो भने यसको उपचार नै छैन । न खोप छ, न औषधी नै । कुनै औषधी खाएर निको हुन्छ भन्ने कुरा भ्रामक मात्र हो । त्यस्ता औषधिले निको हुने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । ज्वरो आउँदा आराम गर्ने, प्रशस्त झोल खानेकुरा खाने र सकभर दुई हप्तासम्म घरपरिवारको सम्पर्कमै नआउने । सकिन्छ भने शौचालय पनि छुट्टै प्रयोग गर्ने । सेल्फ आइसोलेसन र सेल्फ क्वारेन्टाइन नै ठूलो विकल्प हो ।
त्यसै गरेर भेट हुँदा हामी अंँगालो हाल्छौं, हात मिलाउँछौं । अब त्यो सबै छोड्नुप-यो । किनभने कोरोना संंक्रमितलाई छुँदा पनि सर्छ । युरोप र अमेरिकामा भेट हुँदा हग र किस गर्ने चलन भएका देशमा पनि नमस्कार लोकप्रिय भइरहेको छ । हाम्रो त सांस्कृतिक हिसाबले नमस्कार गर्ने संस्कृति छ । टाढैबाट नमस्कार गर्ने । भीडभाड कम गर्नु, अर्को व्यक्तिसँगको सम्पर्कलाई कम गर्नु र अन्य व्यक्तिसँग कम्तीमा एक मिटरको दुरी राख्नु नै राम्रो उपाय हो ।